Fanenjehana varo-maizina :: Trano fitehirizam-panafody nakatona teny Ambohipo • AoRaha
Ela ny ela fa sarona ny sasany amin’ireo trano fivarotam-panafody tsy ara-dalàna eny Ambohipo. Trano iray no tra-tehaka, omaly, ary nakatona avy hatrany niaraka tamin’ny fakàna ny tompontrano amin’ny fiatrehana ny famotorana manoloana an’ ity trafikana fanafody efa diso fanta-daza ity. Vao mainka nampiampanga tena an’ireo mpanararaotra ny valanaretin’ny Covid-19 ireo ny fisian’ ny faharitran’ny tahirim-panafody sy ny fidangan’ny vidiny, tao anatin’ny andro maromaro izao. Nampahafantatra ny fandatsahana baiko tamin’ ireo departemanta minisiterialy voakasiky ny fanenjehana an’ireo mpanao trafikana fanafody ireo ny Filohan’ny Repoblika, Rajoelina Andry, tamin’ny alahady alina lasa teo. Raikitra ny bemidina nataon’ny ekipan’ny minisiteran’ny Indostria, varotra ary ny asa tanana (Mica) niaraka tamin’ny minisiteran’ny Filaminam-bahoaka, izay notronin’ny minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka teny Ambolokandrina sy Ambohipo, omaly hariva.
Nakatona avy hatrany ilay trano, mandra-pahavitan’ ny fanadihadiana hatao ary mety hisy ny sazy ho an’ireo olona voarohirohy. “Fiarovana ny mpanjifa sy ady amin’ ny fifaninanana ara-barotra tsy ara-dalàna izao hetsika izao. Nisy ny fanaraha-maso ny datim-panafody ary ireo tahiry, izay miteraka tsy fahitana fanafody eny amin’ireo toeram-pivarotana ara-dalàna. Nitehirizana fanafody io trano io kanefa tsy ara-dalàna akory. Rehefa natao ny fanadihadiana dia misy olona mivezivezy mividy fanafody tao amin’ilay toerana ”, hoy ny avy ao amin’ny Mica.
An-kilany, efa mandeha kosa ny fifampidinihana mikasika ny vidim-panafody eo amin’ny minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka, ireo manam-pahefana rehetra sy ny Holafitry nasionalin’ny farmasiana ary ny Antokondraharaha misahana ny fanafody.
Fisorohana lozam-pifamoivoizana Ho avy amin’izay ny fanasaziana an’ireo mpanamory môtô
Kitra – Fifindrana mpilalao Tsiriritina klioba malaza any Etazonia Raveloson Rayan
Fanavaozana ny asam-panjakana Hofehezin’ny fepetra manokana ny fandraisana mpiasa vaovao
Basket U-15 an-tambazotra :: Hotontosaina amin’ny zoma ny lalaon’i Madagasikara
Fitsaboana ny covid-19 :: Mendri-pisaorana sy fankaherezana ireo mpitsabo sy ny ekipany